Ahoana no hanombohana ny fanamboarana kitapo fanandramana Covid 19? - BALLYA
Posted on Enga anie 2, 2021, Nataon'i ballyabio, Sokajy 19 taona
Araho ity toro lalana ity, mora ny manangana tsipika famokarana ary manangana ny orinasanao
Misy fomba roa hanombohana ny anao kitapo fanandramana covid 19 raharaham-barotra.
Ny dingana rehetra dia ataon'ny tenanao irery.
O1. Safidio ny tsara Antibiotika SARS-CoV-2 ary antigèna amin'ny famokarana
O2. R&D an'ny teknika alohan'ny famokarana lehibe
O3. Ny famoahana antigène sy antibody amin'ny membrane NC
O4. Laminate pads, NC amin'ny karatra fanohanana
O5. Fanapahana ravina
O6. Esory ao anaty kasety sy amboary ny sakafo
O7. Ny fanangonana ireo kojakoja (fantsom-pitrandrahana, vahaolana buffer, savony, torolàlana hampiasaina sns) ao anaty boaty
O9. Amidy amin'ny tsena
Manomboka amin'ny semi-vokatra.
OA. Safidio taratasy tsy voapaika ho an'ny fanamboarana kit 19 kovaid
OB. Manapaka amin'ny tsipika
OC. Manangona tsipika sy kasety
OD. Ny fanangonana ireo kojakoja (fantsom-pitrandrahana, vahaolana buffer, savony, torolàlana hampiasaina sns) ao anaty boaty
OF. Amidy amin'ny tsena
Ho an'ny orinasa tanora na mpilalao vaovao, ny safidy1 dia tena sarotra ny manao azy. Ny safidy2 no safidy tsara indrindra amin'ny sartup.
Ny safidy1 dia tsy ireo dingana 9 etsy ambony ihany, fa mihoatra noho izany, toy ny fanomanana ny kojakoja rehetra: volamena koloidrà, fanamorana NC, santionana pad, pad conjugate, karatra mpanohana mikoriana avy eo, kasety mikoriana avy eo, kasety mylar, SARS-CoV -2 antibody & antigens, sns. Ho an'ny orinasa manana ekipa R&D ary vonona hamokatra.
Fanontaniana amin'ny antsipiriany misimisy:
Raha te hanokana fotoana fohy hanombohana ny vokatra lehibe, ny safidy2 no safidy tsara indrindra. Rehefa vonona daholo ny kojakoja rehetra dia manomboka haingana ianao amin'ny famokarana kitovan'ny test covid 19.
Inona avy ireo fitaovana ilaina amin'ny safidy roa?
2. Pad santionany
4. Kitapo mylar
5. Kitapo Desiccant
6. Karatra fanohanana mikoriana avy eo
7. Swab nasofaryngeal
8. Tube fitrandrahana
9. Vahaolana buffer
10. antibody SARS-CoV-2 (Cat No. No .: ASARS-27)
11. antibody SARS-CoV-2 (Cat No. No .: ASARS-28)
13. Kasety mikoriana manaraka
14. Kitapo fanangonana rora
15. volamena koloidaly
1. esory ny takelaka ho an'ny fanamboarana kit 19 covid
2. Kitapo mylar
3. Kitapo Desiccant
4. Kasety mikoriana manaraka
6. Kitapo fanangonana rora
7. Tube fitrandrahana
8. Vahaolana buffer
Ireo fitaovana tsy voatery atao: pads alikaola, lancet, pipette tsy azo atao.
Inona no azon'ny BALLYA atao aminao?
BALLYA dia mpanamboatra kitapo fanandramana covid 19 any Shina. BALLYA afaka manampy anao hametraka tsipika famokarana faran'izay haingana. BALLYA omeo ny akora, ny fitaovana, ny tsipika famokarana rehetra ho an'ny orinasa misy anao.
Inona avy ireo fitaovana afaka omen'ny BALLYA?
Kasety mikoriana manaraka
Karatra fanohanana mikoriana lateral
Pipeta azo ovaina
Antibody SARS-CoV-2 (Cat. No. .: ASARS-27)
Antibody SARS-CoV-2 (Cat. No .: ASARS-28)
Antigen an'ny SARS-CoV-2
Esory ny takelaka ho an'ny fanamboarana kit 19 kovaid
Vahaolana buffer (buffer test covid 19)
Mpanapaka tsipika mikoriana manaraka
Mpaninjara mikoriana avy eo
Presser cassette mikoriana
Mpanapaka sombin-kazo santionany
Mpanapaka kofehy vita amin'ny pad
Masinina laminina manify
Inona avy ireo fitaovana ho an'ny famokarana BALLYA afaka manome?
Masinina fanangonana fitsapana haingana (Kitapo fanangonana automatique kitapo)
Masinina famenoana buffer
Lasitra ho an'ny famokarana kasety mikoriana avy eo
Bobongolo ho an'ny fantsom-pitrandrahana
Inona no karazana kitapo fanandramana covid 19 azon'ny BALLYA atolotra?
Kitapo fitsapana Covid 19 Antibody (IgG / IgM)
Fitsapana rora antigène Covid 19
Covid 19 Fitsapana Antibody tsy manara-dalàna
COVID-19 / Flu A / Flu B Combo Fitsapana haingana
Afaka manome serivisy OEM ve i BALLYA?
Mifandraisa amin'ny solontenanay raha mila antsipiriany.
Mifandraisa amin'i BALLYA raha mila tolo-kevitra momba ny orinasa